‘कमरेड हाम्रै रंग र ढंगमा रहन दिनुस्’
कामरेड हाम्रो रंग र हाम्रो सुख, दुःख हामीमै रहन दिनुस् । तपार्इंको सेतो आँखाले हाम्रो रंगको अस्मिता बुझ्दैन । तपाईं र तपार्इंको कैयौं सन्ततिले हाम्रो रंगको महानता महसुस गर्न सक्नुहुन्न, नगरे पनि हुन्छ । तपाईंको सरकारले हाम्रा दाजुभाइको छातीमा गोली ठोक्दा हामीमाथि तपाईंहरुको संवेदनशीलता देखेकै हौं । तपार्इंको हत्यारा बन्दुकबाट हा..
नेपाली समाज, ‘फ्लक डेभिल’ र ‘मिडिया’
हाम्रो समाजमा पछिल्ला समयमा विभिन्न किसिमका हिंसात्मक घटना बढ्दै गएका छन् । चाहे त्यो सामा..
छाउगोठ राख्ने स्थानीयतहको सुविधा रोक्का
कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाको कार्यालयबाट करिब १० मिनेटमै पुग्न सकिने ८, १३, १४ र..
दमनको दलदलमा दलित
काभ्रेको पाँचखालमा अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा डेढ महिनाअघि अजित मिजारको हत्या भयो । त्..
शङ्कर पोखरेलको ट्विट र हामी
केही वर्ष पहिलेका नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधवकुमार नेपाल मन्त्री परिषद्मा दल..
रातो टीकाको करामत
तीजका दिन श्रीमतीले छिट्टै उठेर पूजापाठ गरी खाना बनाइछिन् । आज टीका लगाउनुपर्छ भनेर टीका लगाइदिइन् । चाडबाड परे पनि विदेशमा मतलब हुँदैन । अझ डाक्टरको त पेसा नै यस्तै । कहिल्यै छुुट्टी नहुने । आफू बिरामी चेक गर्न जानुु नै थियो । क्लिनिकमा १० देखी चारको ड्युुटी थियो । अनि ब्रेकफास्ट गरेर लन्चको प्याकेट […]
एक्काइसौंै शताब्दीमा पनि नेपालमा विद्यमान जातपात र छुवाछूत समस्या जस्ताको तस्तै रहनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । परिणामस्वरुप नेपालका ६० लाखभन्दा बढी दलितले प्रत्येक दिन कुनै न कुनै रुपको छुवाछूतको सिकार बन्नुपरेको छ । जातपात र छुवाछूत समस्या नेपालमा मात्र नभई, जहाँ–जहाँ नेपाली पुगेका छन्, ती ठाउँमा समेत संस्कृतिको अभिन्न अंगका ..
तीजको तिथि र थिति बिर्सिएर्क हो ?
प्रथमतः तीजका भगवान् शिवलाई नमन । जसले भोका र प्यासा व्रतालु महिलालाई मादल वा उफरको रफ्तारसँगै दिनभरि उफ्रन मनग्गे क्यालोरी दिने गरेका छन् । तीज एक दिनको हुन्छ । दुई दिनको हुन्छ । ए बाबा लौ चारै दिन सही । तर, यहाँ तीज, जनैपूर्णे सकिएको भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ । सानो छँदा बरु रातको १२ बजेसम्म […]
बोक्सीमन्त्रले निलेको नेपाली समाज
अचानक कोही चर्को स्वरमा चिच्चायो । बेलुकीको आठ बज्दै थियोे । कान ठाडा भए । आँखा रोएको दिशातर्फ मोडिए । मान्छे सल्बलाउन लागे । टर्चको प्रकाश झलमलाउन थाल्यो । केही मिनेटको अन्तरालमै अर्को रून्चे आवाज पहिलेभन्दा केही तलपट्टि उस्तै–उस्तै सुनियो । आत्तिएको आवाजमा कोही चिच्याउँदै थियो, ‘ए छिटो झर त यहाँ ।’ सायद रुनेको परिवार [&helli..
कुरा गरे भयो काम गर्न पर्दैन !
विदेशमा बस्दा पनि छलफलको विषय बन्ने गर्छ– नेपालको राजनीतिक अवस्थाको । मेरो अनुभवमा यसरी छलफल वा कुराकानी हुँदा नेपाली राजनीतिज्ञको खिल्ली उडाउने वा फलानोले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर कसैलाई लाञ्छना वा नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । राज्यलाई मात्र दोष दिनु र आफूचाहिँ नकारात्मक कुरामात्रै गरेर बस्ने बानीले हामी पछाडि परेका हौ..
नेपाली चलचित्रमा बेचबिखनको कथा
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको दसौं राष्ट्रिय दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइँदैछ । सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक समाजका तह र तप्काबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै गरेको यो दिवसका अवसर पारेर पत्रपत्रिका, रेडियो–टेलिभिजनले पनि मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतनामूलक सामग्रीहरु प्रकाशन–प्रसारण गरेर मानव बेचबिखनको अभियानलाई सघाइरहेका छन् ..
पुरुषमा नारीतत्व भर्ने चाड तीज
महिलाहरुको महान चाड तीजलाई आनन्द, उल्लास र शान्तिको चाडका रुपमा लिइन्छ र उल्लासमय तवरबाट मनाइन्छ । पार्वतीले आफ्ना पति र छोराहरुको सुस्वास्थ्यको लागि व्रत बसेको र पूजा गरेको अवसरका रुपमा हरिताकिका तीजलाई श्रीमान छोराछोरीका रुपमा हरितालिका तीजलाई नारीहरुले श्रीमान छोराछोरीका नाममा व्रत बस्ने गर्दछन् । दरखाने दिन विशेष तीज र ऋषी प..
सन्दर्भ : चौरचन चाड : आबऽ हौ चौठीचान, लपकऽ हौ पुडी
तराईमा आइतवार चौठचन्द्र अर्थात् चौरचन चाड मनाइँदै छ । यो चाडलाई स्थानीय भाषामा चौठीचानसमेत भनेर सम्बोधन गरिन्छ । विशेष महत्व एवम् अपार श्रद्धासाथ मनाइने चाडमध्येकोे चौरचन पनि एक हो । यो चाड गणेश चतुर्थीका दिन साँझ व्रतालुले आ–आफ्ना घरको आँगन तथा कौसीबाट उदाउँदो चन्द्रमालाई अर्घ दिएर मनाउने गर्छन् । भगवान् गणेशको श्रापबाट मुक्त ह..
BLOG : राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र : समृद्धिको फास्ट ट्र्याक
नेपाली जनतालाई क्रान्ति वा स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नु छैन । राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था, तानाशाही राजतन्त्रविरूद्ध्र सयांै व्यक्तिले आफ्नो जीवन आहुति दिएका छन् । जसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अर्थात् प्रजातान्त्रिक मुलुक नयाँ संविधान र नयाँ नयाँ नेतृत्व पाइरहेका छौं हामीले । अब संघर्ष, बलिदानी, युद्ध र मुठभेद अन्त्य..
ब्लग : राज्यको ढुकुटी नेताको उपचार बिमा हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, जनसत्ताको आगनबाट न्यानो अनि रातो सङ्ग्रामी अभिवादन ! सर्वोच्च कमान्डर कामरेड ! जनसत्ताको आगनबाट भरिपूर्ण हकअधिकार सहित जोसिलो अभिवादन टक्र्याउँछु ! जनताको स्वर्णिम यो दिनलाई सेतो कागजमा सजाउँदै खुसीका पलहरु साट्ने जमर्को गर्दैछु । हिजो आमूल परिवर्तनको खोजी गर्दै सल्लाको खोटोमा दियालो ब..
संस्कृतिलाई विकृत नबनाऔं
वर्षौं वर्षदेखि चलिआएका संस्कृतिलाई नयाँ पुस्ता भनाउँदाले विकृत बनाइरहेका छौं । हामीमा पश्चिमा संस्कृति नक्कल गर्ने बानी बसेको छ, यसले हाम्रो समाज र संस्कृतिलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर हामीले कहिल्यै पनि सोचेका छैनौं । सामाजिक महत्व बोकेका कतिपय चाडबाड पश्चिमा संस्कृति नक्कल गर्नाले विकृत हुँदै गइरहेका छन् । हामी आफ्ना चाडबाडलाई खास..
तिम्रो बुबाले के काम गर्नुहुन्छ ?
सङ्घर्षका दौडाइको क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग भेट हुन्थ्यो । नयाँ मानिससँग भेट हुँदा प्रायः हाम्रो दोहोरो परिचयबाट कुरा सुरु हुन्थ्यो भने कति ठाउँमा म एक्लैले मात्र परिचय दिनुपथ्र्यो । परिचयका क्रममा धेरै ठाउँमा नाम, ठेगाना, पेसा बताइसकेपछि प्रत्येक पटक एउटा प्रश्न आउँथ्यो– तिम्रो बाबा के गर्नुहुन्छ ?’ अघिसम्म एकद..
कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र संविधान संशोधन नगरौं
नेपालको संविधान २०७२ हामी सबैका लागि गर्व र प्रतिष्ठाको संविधान हो । करिब ७ दशकदेखि नेपालीहरुले चाहेको र त्यसकै लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन हुँदै निर्दोष नेपाली जनताले सहादत् पाइरहेको परिस्थितिमा धेरै कष्टका बाबजुद २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । जारी भएकै दिनदेखि यो संविधानमा भएका केही बुँदा र केही छुट भएका बुँदाका विषयलाई [..
सम्झनामा मेरा बुवा
बिहान ढिलो उठ्ने बानीले गर्दा जहिले नि अफिस पुग्न हतारो ! स्कुटरलाई भीडको बाटोमा छिचोल्दै जाँदैथिएँ । एउटा गल्लीबाट मोटर निस्क्यो, स्कुटरको गति अलि ढिलो बनाएँ । मभन्दा पछाडिबाट एउटा मोटरसाइकल त्यो मोटरलाई छोइएलाझैं गरी छलाउँदै तीव्र गतिमा हुइँकियो । सायद अफिस नै पुग्ने हतारले होला । मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने केटीले ब्यागलाई साइड प..
‘धनी हुन बल नगरुन्’
नेपालमा अनेकौं थरी संस्कृति छन् । वीरतापूर्ण इतिहास छ । स्वभिमानी संस्कार छ । अनेकतामा एकता छ । एकतामा शक्ति छ । पौरखी र जाँगरिला हात प्रशस्त छन् । प्राकृतिक सुन्दरता र आश्चर्यलाग्दा ठाउँ कमी छैन । अन्न उब्जने मलिला फाँटले देशको अधिकांश भाग ओगटेको छ । औषधिजन्य उत्पादनका लागि वन–जंगल छन् । विद्युत् उत्पादनका […]
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका चुनौती
पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार बिस्तार हुने क्रममा भर्खरै तेस्रो चरणको विस्तारमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट १३ जना नयाँ मन्त्री थपिएका छन् । थपिएका मन्त्रीमा केही पुरानै अनुहार दोहरिएका छन् भने केही नयाँ अनुहारसमेत देखिएका छन् । तीमध्येमा यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् नेपाली काङ्ग्..
लोप हुँदै मिथिलाको परम्परागत गहना
भनिन्छ– महिलाको सौन्दर्यतामा गरगहनाले भूमिका खेलेको हुन्छ । चाहे त्यो परम्परागत होस् या आधुनिक गहना । तर, समयअनुसार गरगहनामा समेत आधुनिकीकरण बढ्दो छ । आधुनिकीकरण मौलाउँदा परम्परागत गहना भने लोप हुँदै गएका छन् । पहिचानका लागि संघर्ष भइरहँदा आधुनिकीकरणले धेरै कुरालाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । खानपानमा होस् वा भेषभूषामा । मिथिला पन..
गोविन्द केसीहरु पागल ठहरिन्छन् किन ?
ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन । यो कहिलेसम्म ? भ्रष्ट र मनपरितन्त्रको विरोधमा आवाज उठाउने गोविन्द केसीहरु पागल ठहरिन्छन् । आफ्नो देश छाडी अर्काे देशमा गएर शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गरिआए आर्जन गर्नुलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । करिब २०० वर्षअगाडि ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने नेपालीको पृष्ठभूमिलाई पनि वैदेशिक रोजगारीकै परिभाषाअन्तर्गत राख्..
नेवि सङ्घको अबको बाटो…
नेपाली काङ्गे्रसको प्रभावशाली भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११आँै महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । झन्डै १० वर्षदेखि हुन नसकेको ११औँ महाधिवेशन संयोगवस ११औँ दिनमा पुगेर नै अन्त्य भएको छ । पक्कै पनि देशको ठूलो प्रजातान्त्रिक शक्तिको भातृ सङ्गठनको यति लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन नसक्दा थुप्रै समस्याहरु झेल..
५५ वर्षमा पाँच सयको नोट देख्दा तीनछक
बझाङ जिल्लाको विकट गाउँमा आमाछोरी बस्थे । आमाको उमेर अनुमान गर्दा ५५÷६० र छोरीको ३५÷४० वर्ष हुँदो हो । तर, यिनीहरु स्वयम् आफूलाई आफ्नो जन्ममिति र उमेर थाहा थिएन । किनकि उनीहरुले पढेका थिएनन् । पात्रो तथा घडी एवम् अन्य व्यक्तिसँग उनीहरुको भेट कमै हुन्थ्यो । जंगलको पल्लो कुनामा एक सानो झुपडी थियो । उनीहरुको […]
कृषि आधुनिकीकरणमा जोड दिऔँ
नेपालमा आधुनिकीकरण सँगसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि सुधारको अपेक्षा गरियो तर आशा गरिए अनुसारको उपलब्धि भएको छैन । परम्परागत खेती प्रणालीमा आधुनिक कृषिका केही विशेषताहरु अपनाइए पनि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको छैन । आधुनिकीकरण र सहरीकरणको हाम्रो बुझाइ गलत भएर होला कृषि दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । यही कारण गाउँका कृषक सहर र व..
वैदेशिक रोजगारीमा महिला असुरक्षित
आजसम्म जति पनि महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ती सबै कुनै न कुनै किसिमले शोषणमा परेका छन् । सयमा १० प्रतिशतलाई मात्र राम्रो भएको होला तर समग्रमा महिलाको वैदेशिक रोजगार सुरक्षित छैन । हाउसमेडका रुपमा जति पनि महिला गएका छन्, त्यो भनेको सरासर बेचिनु नै हो । पैसा कमाइ हुन्छ भन्दैमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर […]
म के गरौं सरकार ?
सोलखुम्बुबाट काठमाडौं झरें । काठमाडौंको बसाइ त्यति सहज थिएन । काठमाडौंबाट प्रकाशित राजधानी दैनिकमा काम गर्न थालें । दैनिक बिहान ४ बजे १८३ थान पत्रिका बोकेर कपन, चाबहिल, गौशाला, सिनामंगल, तीनकुने, कोटेश्वर, मैतिदेवी, गोंगबु, टीकाथलीसम्म पत्रिका वितरण गर्थें । १८३ घरमा पत्रिका बाँडिसक्दा १०:३० बज्थ्यो । कोठा पुग्दा ११ बजिसकेको हुन..